Gị Android ekwentị gbajiri, ma ọ bụ zuru, dị mwute ikwu gị niile dị mkpa data ọnyà na ya? Na-eche na obi gbawara banyere ya? Ị na-adịghị na ya. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike mfe na-niile gị data azụ dị ka ogologo oge ị mgbe kwadoo gị Android ekwentị na PC ma ọ bụ ígwé ojii. Isiokwu a na-enye gị a zuru nduzi na-esi ndabere Android ngwa, kọntaktị, ozi, photos, oku na ndekọ, music, video na ndị ọzọ.
Part 1. ndabere Android data ka PC otu otu aka Part 2. All-na-otu Android ndabere ka PC
Part 1. ndabere Android data otu otu aka
1. ndabere Android na kọntaktị na kalenda
Ọ bụ otu nke achicha na-ndabere kọntaktị na gam akporo. Ị nwere ike mfe ime ya site onwe gị. Dị nnọọ aga Ndi ana-akpo ngwa na mbupụ niile kọntaktị na SD kaadị. Mgbe ahụ, na-eji eriri USB ndabere Android kọntaktị na PC. Ọ bụrụ na gị Android ekwentị enyere gị mmekọrịta Google akaụntụ, ị nwere ike ịga Ntọala> Nnabata & mmekọrịta nkwado ndabere na mpaghara na kọntaktị na kalenda on Android ka Google akaụntụ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ iji a ọzọ ngwá ọrụ, i nwere ike ịgbalị Wondershare MobileGo for Android. Ebe a na-ụzọ atọ nkwado ndabere na mpaghara Android kọntaktị nzọụkwụ site nzọụkwụ.
2. ndabere Android SMS
N'adịghị ka kọntaktị ndabere, Android SMS ndabere amama na-a bit siri ike. I nwere ike ime ya na gị onwe gị. Kama, ị na-adabere ụfọdụ ọzọ ngwaọrụ, dị ka SMS ndabere +, SMS ndabere & Weghachi, Wondershare MobileGo for Android, wdg Ebe a, m na-egosi gị kasị mma 3 Android SMS ndabere ngwa-enyere gị aka ndabere Android SMS ozi na MMS effortlessly.
3. ndabere Android ọdịyo na video
Iji ndabere ọdịyo na video si Android, i nwere ike ịgbalị na omenala ụzọ. Jiri eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na PC. Gị Android ekwentị ga-setịpụrụ dị ka a na-ewepu disk mbanye. Ịnyagharịa a mwepụ disk mbanye na imeghe ya. Chọta nchekwa aha Music, Video ma ọ bụ ihe dị ka na. Ịdọrọ na dobe ha gị PC maka ndabere.
4. ndabere Android photos
Ịhụnanya na-photos na gị Android smartphone? Otú ọ dị, ọ bụghị ihe ize ndụ ịhapụ photos n'ebe ahụ. Ị nwere ike ihichapụ photos accidently. Ka njọ, ọtụtụ photos ga-ewegharakwa ukwuu ohere. Ke ikpe, i nwere ike amasị ndabere Android photos. Ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nduzi na otú ndabere igwefoto foto na dị photos na kọmputa na Google +.
Part 2. All-na-otu Android ndabere ka PC
-Esi ike gwụrụ nke ndabere Android data otu otu na-achọ n'ụzọ ụfọdụ nkwado ndabere na mpaghara ihe niile na oge? Ị na-nri ebe. Ndị na-esonụ akụkụ-egosi na ị 4 mfe ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Android ka PC. Dị na-agụ na na họrọ ọkacha mmasị gị na onye na-agbalị ya mgbe e mesịrị.
1. ndabere nile nchekwa na Android ekwentị na PC
N'ezie, otú a bụ ka ị na-eme a zuru oyiri nke Android SD kaadị na nkwado ndabere na mpaghara ya PC. Site na iji nke a ụzọ, ị nwere ike ndabere audio, photos, video, akwụkwọ na ngwa. Ọ bụrụ na ị exported niile Android kọntaktị na SD kaadị, ị nwekwara ike ndabere kọntaktị.
Cheta na: N'ụzọ dị otú a, na ngwa na-eji ngwa data nwere ike mebiri emebi.
Otu Pịa ndabere kọntaktị niile, SMS, ngwa, audio, video, photos, oku na ndekọ na kalenda.
Nzọụkwụ 1. Bilie gị Android ekwentị ejikọrọ
Jikọọ gị android ekwentị na kọmputa site na iji eriri USB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ usoro ihe omume ma họrọ ndabere ekwentị gị ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. One-pịa Android ndabere ka PC
Mgbe ị na ekwentị ahụrụ, ị ga-ahụ window n'okpuru. Site window, ị nwere ike mfe na-ahụ na a software na-ahapụ gị ndabere kọntaktị, ozi, photos, kalenda, oku na ndekọ, music, video, na ngwa. Ị nwere ike uncheck ọdịnaya ọ bụla ị na-achọghị ka ndabere. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy.
Site ndabara, nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-azọpụta na D: \_ Documents \_ Wondershare \_ MobileGo \_ ndabere. I nwekwara ike ịgbanwe Save ụzọ na-echekwa nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ka ọ bụla-amasị gị.
3. SyncDroid: ọzọ Android ndabere ka PC software
N'ezie, SyncDroid nwere ihe abụọ nsụgharị, na otu onye bụ maka Windows PC, ndị ọzọ bụ maka Android ngwaọrụ. Ma nsụgharị ekwe ka ị ndabere SMS, kọntaktị, oku na ndekọ, audio, video, foto na igwefoto na SD kaadị na ihe nchọgharị ibe edokọbara. The Android version ndabere gị Android ekwentị SD kaadị ma ọ bụ Dropbox.
Soro nkuzi na otú ndabere Android ka PC:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ekwentị gaa na PC na ibudata na wụnye Windows version nke SyncDroid on PC.
Nzọụkwụ 2. Ozugbo ejikọrọ, gị Android ekwentị ga-gosiri na ekpe nke isi window.
Nzọụkwụ 3. Click ndabere taabụ. Mgbe ahụ, họrọ faịlụ edemede na ị chọrọ ndabere.
Nzọụkwụ 4. Tinye aha maka nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na-eme ka ụfọdụ dee banyere ndabere ọ bụrụ na ị na-amasị.
Nzọụkwụ 5. Pịa ndabere. SyncDroid amalite ndabere gị Android ekwentị. Mgbe ọ na-agwụ agwụ, pịa rụchaa ma ọ bụ Open ndabere ele nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Ndabere oku na ndekọ
Ndabere nchọgharị na ibe edokọbara
Ndabere na ngwa na-eji ngwa data
Selectively ndabere data
-Arụ ọrụ na a Mac kọmputa
> Resource> Windows> A Full Guide na Olee otú nkwado ndabere na mpaghara Android na ekwentị PC